ခုရက်ထဲ..ကဗျာ အရူးထနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စာဖတ်သူ Hush က- ထပ်ပြီး ဝေမျှပေး လို့- အကြောင်းကလည်း တိုက်ဆိုင်တုန်း..၀ါသနာကလည်း မနေသာ သမို့- လျှောက် ပြီး စကားဖလှယ်ကြည့်နေတာပါ။ တော်ကြာ မောင်သာနိုးတို့မြင်ရင်..အိမ်မက်ဆိုးတွေ မက်နေမှာ လည်း စိုးရတယ်။း)
ကိုယ်က..စာကြီးပေကြီးလည်း သိပ်မဖတ်ဘူးတော့..အခုလို..တကူးတက..ဂန္ဓ၀င်စာပေ လင်္ကာတချို့ ကြုံကြိုက် ဖတ်ရှုရတာ..အတော့်ကို ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။ Rumi ဆိုတာ..၁၁ ရာစု လောက်က..ပါရှန်း ကဗျာဆရာ ကြီး ဆိုတော့..အတော် ဂန္ဓ၀င် မြောက်နေပြီပဲ။ လောက သားကောင်..လူ့သဘာဝ..တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြီး အခွင့်ပေး စပ်ဆို ထားတာတွေကိုး။ ဒါပေမဲ့.. ထိန်းချုပ်ခြင်း..စောင့်ထိန်းခြင်း..ကျင့်ကြံခြင်း ဆိုတဲ့ သီလတရား ကိုတော့..ခါးသက်လို့လားတော့မသိ- သူဘာလို့ ထဲ့ မစပ်ဆို ခဲ့သလည်း လို့လည်း တွေး မိတယ်။ ကြည့်ရတာ- ရှေးဦး အိပ်ဇစ် ဘိုးအေ ကြီး တယောက် ဖြစ်လိမ့်မည် ။ အိပ်ဇစ် ကတော့..လူဆိုတာ စဖြစ် ကတည်းက.. အိပ်ဇစ် ပဲလေ။ ဒါပေမဲ့..အကန့်အသတ် အတားအဆီး မဟုတ်ရင်တောင်..စည်းဘောင်တခု တော့ ရှိသင့်တယ် မဟုတ်လား။
ဘာပဲပြောပြော- ခံစားဘာသာပြန်ကြည့်လို့တော့ .. ကောင်းသားပါ။
As an unexpected visitors.
Because each guest has been sent
ဒီခန္ဓာကိုယ် ကြီးက ဧည့်ရိပ်သာ ဆိုတော့
နေ့သစ်တိုင်းမှာ သူတို့ရောက်လာ ပေါ့-
ပျော်ရွှင်မူ- စိတ်ပျက်မူ- တွန့်တိုမူ တဲ့လား
တဒင်္ဂ အခိုက် သတိရှိရင်တောင်
မမျှောင်လင့်တဲ့ ဧည့်ယောင်ဆောင် လို့။
အားလုံးကို ကြိုဆို ဧည့်ဝတ်ပြုရဲ့-
မဖြေဖျောက်နိုင်တဲ့ ပူဆွေးမူ တထွေးကြီး ဆိုရင်တောင်-
တယောက်စီ တိုင်းကို- ဂုဏ်သရေ ရှိစွာ
လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက် လိုက်ပါလေ။
အတွေးညစ်ညစ်- ရှက်ရွံ့ခြင်း နဲ့ မလိုတမာ မာန်မာနတွေ-
ဖိတ်သာ ဖိတ်ခေါ်- ပျော်ချင်လည်း ပျော်ကြ-
ဘယ်သူတွေ ပဲလာလာ- ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်ပါလေ
နင့်ဂေဟာကို စောင့်ကြပ်ဖို့ သူတို့တွေကို-
စေလွှတ်လိုက် တာ မို့ပါ။
ဤလူသား ခန္ဓာသည်- ဧည့်ဂေဟာတခု
တမိုးသောက်တိုင်း- ဧည့်သည်သစ်တို့ ရောက်လာစမြဲ
ပျော်စရာ- ၀မ်းနည်းစရာ- ရွံမုန်းစရာတွေနဲ့
တချို့သော တဒင်္ဂ အသိတရားများဟာ
ဧည့်ခံ ကြိုဆိုလိုက်ပါ အားလုံးကို-
၀မ်းနည်းပူဆွေးမူ ဧည့်သည် တသိုက်ဟာ
သုံးမရ အောင် ဖျက်ဆီးသည့်တိုင်
ဂုဏ်သရေ ရှိ ဧည့်သည်များ သကဲ့သို့
ရီမော ပျူငှါ ဖိတ်ခေါ်ပါလှည့်-
ဧည့်ကိုယ်စီကား- ကြမ္မာတံတိုင်း တနိုင်းဆီက
( translated by Hush)
ဒီနေ့ တော့ဧည့်ခန်းလေးတွေ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်။ ဘုရားခန်းလေးသဖွယ်ပဲ။အသံဝင်ပေးခဲ့ပါတယ် ကေရေ။
မြဲနေတဲ့ မမြဲခြင်းတရားတွေ ...
Thanks alot!!!!!You are very energetic artisit. Pardon me for giving you alot of works. I do not assume you to translate all I give you. It is Ok even you don't do it. I just love International Poems thus like to share. By the way, have you read " Tao Te Ching by Lao Tzu"?
ဖားဖြစ်မှာစိုးလို့ ကဗျာတွေ ဘာသာ မပြန်တော့ဘူးဗျား)
Ma Manorhary atwet da lay tin pay lo ya malar. I feel " Ar Nar Tae " for typing since it isalittle bit long. http://www.geocities.com/adorahnin/ttc01a.jpg
ဆရာမ ရီရေ- ဘုရားခန်းတော့မလုပ်ပါနဲ့။ ဘုရားထွက်ပြေးနေမယ်။း)
ကိုအောင်ပြောတဲ့- ဧည့်ဆိုး- ဆိုတဲ့ အသုံး ကောင်းတယ်။ ဟုတ်တယ်..ဧည့်ဆိုးရော ဧည့်ကောင်းရော ရောနေတာပဲ။ ရိပ်သာ ဆိုတော့လည်း မစိစစ်နိုင်ပေါ့နော်။
Hush-ရေ- အခုလို မြှောက်ပေးတဲ့ အတွက်- ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Tao Te Ching by Lao Tzu"- အဲဒါ လည်း မသိပါဘူး။ မနော်ဟရီကတော့..၈၁ ချက်တောင် ရှိတယ်ဆိုတော့..ခု Hush ပေးတဲ့ တချက်ကိုတော့..ရိုက်ပေးပါ့မယ်နော်။ မနော်ရေ-၈၁ ချက်တော့..မနှိပ်စက်ကြပါနဲ့တော့။း) တော်ကြာ..ကိုအောင်သာငယ်ပြောသလို-ဒီဘလော့က..ဖားတွေ အော်လှချည်လားဖြစ်နေ အုံးမယ်။ ဗမာ ဇော်ဂျီ လက်ကွက် ကျင့်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်။ သိပ်မကြာပါဘူး။ အေဖိုးတရွက်လောက်ရိုက်လိုက်ရင်..စလို့ ရပါပြီ။
ပီတိ- ရေသာခိုး)
ကိုဆောင်းယွန်းလ- ကျမကတော့..ပါဒ တွေ ၀ါဒတွေ သိပ်မသိဘူး။ ခ၀ါချ စရာ ရှိရင်တော့.. ချပြစ်လိုက်မှာပဲ။း)
ဂန္ဓ၀င်ကဗျာတပုဒ်ကို ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် ကေနဲ့ Hushကို ကျေးဇူးပါ…
သားနေမကောင်းတာနဲ့ပို့ စ်ကောင်းတွေ အဖတ်နောက်ကျပြီ ကေရေ… ဖြေးဖြေးချင်းလာခံစားမယ်…